Shiinaha TY160-3 Soosaaraha Bulldozer iyo Alaab-qeybiye | Xuanhua
TY160-3 cagaf-cagafku waa mid adag, wareejin awoodeed, awood gacan ka geysashada xakamaynta, tijaabada hawo-hagaha ayaa la xakameynayaa, oo leh hal kabadh oo gacanta ku haya qalabka meeraha. Waxay la socotaa qol raaxo leh, khad casri ah oo loogu talagalay qaybo daboolan iyo xoojinta waditaanka ugu dambeeya.
TY160-3 cagaf-cagafku waa mid adag, wareejin awoodeed, awood gacan ka geysashada xakamaynta, tijaabada hawo-hagaha ayaa la xakameynayaa, oo leh hal kabadh oo gacanta ku haya qalabka meeraha. Waxay la socotaa qol raaxo leh, khad casri ah oo loogu talagalay qaybo daboolan iyo xoojinta waditaanka ugu dambeeya. Waxay soo bandhigeysaa waxsoosaar waxsoosaar sareeya, karti safar wanaagsan, howl fudud. Waxay qabataa ku habboonaanta si loo dayactiro qiimo jaban sababtoo ah qaabdhismeed fudud oo leh 6pcs rollers track. Waa cagaf cagaf fiican oo loo isticmaalo aagga saliidda, abuurista dhuxusha, nidaamka deegaanka iyo aagga jilicsan iwm.
Miisaanka hawlgalka (oo ay ku jiraan ripper) (Kg): 16800
Cadaadiska dhulka (oo ay ku jiraan ripper) (KPa): 65.6
Qiyaasta raadadka (mm): 1880
Min. nadiifinta dhulka (mm): 400
Awoodda seexinta (m): 4.4
Ballaaran daab (mm): 3479
Ugu badnaan qodida qoto dheer (mm): 540
Qiyaasaha guud (mm): 514034793150
Nooca: Weichai WD10G178E25
Kacaan la qiimeeyay (rpm): 1850
Awoodda duufaanta (KW / HP): 131
Ugu badnaan Xuddunta (Nm / rpm): 830 / 1000-1200
Isticmaalka shidaalka ee la qiimeeyay (g / KWh): 200
Nooca: Jidku waa qaab saddex-xagal ah.
Sprocket-ka ayaa laastikada kor loo qaaday: 6
Tirada roogayaasha wadada (dhinac kasta): 2
Goobta (mm): 203.2
Baaxadda kabaha (mm): 510
Qalabka 1aad 2aad 3aad
Horan (Km / h) 0-3.29 0-5.82 0-9.63
Dib udhac (Km / h) 0-4.28 0-7.59 0-12.53
Ugu badnaan cadaadiska nidaamka (MPa): 15.5
Nooca bamka: Bamka saliidda Gears
Soo saarida nidaamka L / min: 170
Beddelka Xuddunta: 3-element 1-marxalad 1-waji
Gudbinta: gudbinta Qorshaynta, wareejinta awooda oo leh sadex xawaare oo horay ah iyo sadex xawaare oo gadaal ah, xawaare iyo jihada ayaa si deg deg ah loo wareejin karaa.
Xawaaraha isteerinka: Mashiinka dhuxusha badan leh ee tamarta badan leh ee saliidda lagu duubay guga. Haydarooliga ku shaqeeya.
Gawaarida kama dambaysta ah: Darawalka kama dambaysta ah waa laba jibbaar iyadoo la adeegsanayo qalabka loo yaqaan 'spur gear' iyo 'sprocket', oo lagu shaabadeeyo shaabadda duo-cone.
Hore: TY165-3 Cagaf-cagaf
Xiga: SD6N Bulldozer